(အရင်က တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာအဟောင်းလေးပါ။)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:48 AM
It toughs my heart seriously.
ခံစားရတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့မိခင်။ ပြည်သူအားလုံး အားကိုးတကြီးနဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တရတဲ့မိခင်။ အမေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးကို အမေ့လက်၊ အမေ့မေတ္တာနဲ့ အမေ ဖန်တီးခွင့် အမြန်ဆုံးရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။
Thein Htike said...
Great Poem. Really Great.
ရင်ထဲကို ထိရှခံစားမိစေတဲ့ ကဗျာ..
ခုနေ ဘာလုပ်ကြရင် ကောင်းမလဲ။
သူတို့ ဖက်က ခြေလှမ်းတိုးလာပြီ။
အမေကို ဒီလို ဆက်ဆံပြတယ်ဆိုတာ သူ့ သားသမီး သူ့ပတ်ဝန်းကျင် သူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ စိန်ခေါ်တာပဲ။
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ အစ်ကိုရေ့ ဒီလိုအချိန်မှာဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပိုင်္ပြီးကျေးဇူးတင်တယ် ခံလည်းခံစားရတယ် ။
ရင်ထဲ တကယ်ကိုရောက်ပါတယ် အကိုရေ
ကျွန်မက ဘာသာစကား သိပ်အားနည်းတော့ ကဗျာတွေကို ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သိပ်နားမလည်လို့ ခံစားလို့ သိပ်မတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကဗျာကိုတော့ နားလည်းလည်တယ်၊ ခံစားလို့လည်းတတ်တယ်။ အားလုံးရဲ့ အမေအတွက် ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ဒီကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။
"ဝါးလုံးခေါင်းထဲလသာတယ်" ဆိုတဲ့ စကားက တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အပစ်တင်ချင်ရင် ပြောတဲ့စကားလို့သိထားတာပါ။
ဒါကို ကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကောင်းကင်ကိုရဲ့ အရေးလေး သဘောကျတယ်ဗျာ...
"အမေ့ရင်ထဲက ကဗျာ တစ်ပုဒ်ဆွဲထုတ်
အဲဒီ့ မိစ္ဆာတောအုပ်ကို သားတို့ ခုတ်ကြမယ် အမေ"
မိစ္ဆာတောအုပ်ကြီး ရှင်းဖို့ကိုလူထွေးတို့ လဲ တတ်အားသလောက် ဝိုင်းခုတ်မယ်...
tae lar kaung kin koo, so sad
I am crying with reading your great poem.
ကဗျာကောင်းလေး ဘယ်တော့မှ ဟောင်းမသွားဘူး။
အမေ့အကြောင်းတွေလည်း ဘယ်တော့မှ ဟောင်းမသွားဘူး ။ မိစ္ဆာကောင် တွေ ရဲ့ ရာဇဝတ် ဇာတ်ကြောင်းတွေ သမိုင်းမှာ စွန်းကျန်ရစ် ခုံရုံးတင် စစ်မှ ရတော့မှာ ..ခုလောလောဆယ် အမေကျန်းမာစေဖို့ ဘေးမသီ ရန်မခ စေဖို့ဆုတောင်းပေးရုံက လွဲလို့ကျန်တာတွေ ဘာမှ လုပ်မပေး နိုင်တဲ့ ကိုယ့် ကိုကိုယ် အားမရမှုတွေ အပြည့်နဲ့....သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလိုက်မိပါတယ် (ကို) ကောင်းကင်ကိုရေ..
ရင်ထဲမှာ လှိုက်ပြီးခံစားရပါတယ်.. ကဗျာလေးဟာ အရမ်းထိမိတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါ.. အစစအရာရာအနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးအတွက် ဘ၀တခုလုံးပေးဆပ်နေတဲ့ အမေ့အတွက် သားတို့အမြဲမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးလျှက်ပါ... အမေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး သားတို့လိုချင်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးပေါ်ထွန်းလာပါစေလို့...
အနတ္တ အနော်မာ said...
တံခါးတွေ ဖွင့်ပေးတဲ့လက်အဖြစ် အလင်းမြူတွေဖြာဆင်းပေးတဲ့မနက်အဖြစ် ရေးသထက်ရေးနိုင်ပါစေ
ကိုကောင်းကင်ကိုက cbox မထည့်ထားတော့ပြောချင်တာကိုဒီမှာပဲပြောခဲ့ရတော့တယ်...
ခေတ်ပေါ်ကဗျာသမား ကောင်းကင်ကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာကဗျာရေးဖွဲ့နိုင်ပါစေ..
“သူ့အတွက် ဘာမှ စိတ်ပူစရာ မလိုဘူး၊ သူ အဆုံး အစွန်ထိ တွက်ပြီးသား၊ ထောင်ကျမှာ ကြောက်ရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်ဘူး လို့်” ပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်မလေးစားရသောသူ ဂုဏ်ယူရသောသူ အားကျရသောသူ အမြဲဦးညွှတ်ရသော အမေ့ .. အတွက်
အားလုံးဆန္ဒတွေဒီကဗျာထဲစုပြီးထည့်ထားသလိုပဲ ဖတ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးပါ ကောင်းကင်ကို....
အစ်ကိုရေ!!! "ရင်ထဲကအမေ" ကဗျာလေး ကူးယူသွားတယ်... "အမေ့ မွေးနေ့" အတွက် တင်ပြချင်လို့ပါ..
ခြောက်လှန့် နေတဲ့ စာရင်းရှည်